Antony mahatonga ny alika hisotro rano sy mandoa | Tontolo alika
Ilaina amin'ny fiainana ny rano ary mila azy sy ny alikanao amin'ny fatra isan'andro ianao. Rehefa marary ny alika, ny fihinanana rano dia ampirisihina hatrany ho anisan'ny fikarakarana manokana, satria ny hydration dia zava-dehibe amin'ny fahasalamana sy ny fizotran'ny aretina.
Na izany aza,inona no tokony hataoko rehefa misotro rano be sy mandoa ny alikako? Ny toe-javatra toy izao dia miteraka ahiahy, tsy fantatra izay hatao na farafaharatsiny ny antony mahatonga ny vatan'ilay alika toy izao, ka manasa anao izahay hamaky ny lahatsoratra manaraka.
1 Rahoviana no manahy?
1.1 Rehefa misy tsy fahampiana rano
1.2 Rehefa misy katsentsitra tsinay
1.3 Rehefa misy diabeta
1.4 Rehefa misy fahasimbana voa
1.5 Rehefa misy ny tsy fahafahany mandray ny sodium
2 Antony hafa mahatonga ny alikanao handoa
2.2 aretin'ny sarakaty no nahazo
3 Inona no ataoko raha misotro rano sy mandoa ny alikako?
3.1 Zahao ny loany
3.2 Jereo raha averiny io
3.3 Mitandrema amin'ny rano
3.4 Raha averimberina imbetsaka dia mankany amin'ny vet!
Rahoviana no manahy?
Rehefa misy tsy fahampiana rano
Amin'ny ankapobeny dia ity ny antony mitarika mandoa alika avy hatrany rehefa avy nisotro rano. Inona no atao hoe tsy fahampiana rano? Mitranga izany rehefa tsy ampy ny rano lanin'ny alika, ka manomboka vaky ny vatana.
Raha izao ny alika tsy ampy rano, Tsy ara-dalàna kokoa ve ny manatsara ny olana raha mampiasa rano ianao? ¿Fa maninona izy no mandoa?? Rehefa mahatsapa ho tsy ampy rano ny alika ary manana loharano misy rano eo akaiky eo, dia hiezaka hisotro faran'izay betsaka araka izay tratra izy mandanjalanja ny vatanao; Na izany aza, ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanjakan'ny vatany sy ny habetsaky ny rano tampoka hiteraka karazana hatairana, izay hiteraka fandoavana.
Vokatr'izany dia mamela ny alika hanana rano antonony arakaraka azy habe sy lanjany, mijanona misotro minitra vitsy alohan'ny hanohizana misotro. Hanampy anao izany mandritra ny famindrana any amin'ny mpitsabo biby, izay afaka manome sosokevitra fepetra hafa miankina amin'ny toetran'ny alika, ankoatry ny famaritana ny antony mahatonga ny tsy fahampian-drano.
Rehefa misy katsentsitra tsinay
ny katsentsitra tsinay dia olana izay dia mety hisy fiantraikany amin'ny alika kely na alika olon-dehibe, mangina ny sasany ary sarotra ny milaza fa mampiasa ny alikany mpampiantrano izy ireo, ny sasany kosa mitondra isan-karazany olana ara-pahasalamana, toy ny mandoa.
Raha mijaly ny alikao a aretin-katsentsitra, azonao atao ny mandoa rehefa avy misotro rano amin'ny fotoana iray, izay hiaraka amin'ny hafa soritr'aretina toy ny fivalanana ary amin'ny alika kely, ny distension ny vavony.
Rehefa misy diabeta
Diabeta amin'ny alika mahazatra kokoa noho ny nieritreretanao azy io ary iray amin'ireo lehibe soritr'aretina diabeta amin'ny alika dia fitomboana be amin'ny fanjifana rano izany, satria manakana ny vatan'ilay alika tsy handray otrikaina avy amin'ny sakafo ny aretina.
Ary koa, anisan'ireo soritr'aretina diabeta hafa ny mandoa sy mampihena ny lanja, ka tsy mahagaga raha raha ilay aretina mahazo ny alikanao rehefa avy nisotro rano. Raha miahiahy an'izany ianao dia mamporisika anao izahay handeha haingana any amin'ny mpitsabo biby ary atolotrao ny alikao amin'ireo fitsapana ilaina.
Rehefa misy fahasimbana voa
La tsy fahombiazan'ny voa Aretina iray hafa izay misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny alika ary mety hahafaty. A isan-karazany ny olana ara-pahasalamana, manomboka amin'ny homamiadana ka hatramin'ny fanapoizinana, izay mitaky fikarakarana be dia be, toy ny fampiasana sakafo manokana ho an'ny alika manana olana amin'ny voa.
Misy maro soritr'aretin'ny tsy fahampiana ary eo amin'izy ireo dia mahita a hetaheta tafahoatra, izay mety hitarika anao alika mandoa.
Rehefa misy ny tsy fahafahany mandray ny sodium
Io olana io no antsoina hypocalcemia, ny tsy fahafahan'ny vatan'ny alika mifoka sodium avy amin'ny sakafo sy rano. Io aretina io, toy ny aretina hafa, dia tsy maintsy fantarin'ny mpitsabo biby.
Raha mararin'ny fivalanana ny alikanao dia tsy hisotro rano be dia be ihany izy fa ho faty koa mandoa ary mijaly noho ny fivalanana, ankoatry ny fambara hafa izay mila fitandremana. Betsaka ny antony mahatonga ny tsy fahaizany mandray sôdiôma, ao anatin'izany ny tsy fahombiazan'ny voa sy ny fanafody sasany.
Rahoviana no manahy? ny mandoa indraindray tsy tokony ho mahasosotra anao izany satria indraindray dia vokatry ny sakafo manelingelina ny vavoninao ary na ny regurgitating sakafo hanampy anao handevona azy ireo, izay ara-dalàna tanteraka.
Antony hafa mahatonga ny alikanao handoa
Ho fanampin'ny antony tokony hampiahiahy anao ny alikanao raha misotro rano sy mandoa izy, ny marina dia misy antony maro hafa ahafahany manao izany, fa tsy ireo izay efa notanisainay ihany. Ary ny sasany dia zava-dehibe tokony hotadidina satria manome fampitandremana ho anao ny biby fiompinao.
Noho izany, hanome hevitra eto isika antony hafa mahatonga ny fandoavana mety hitranga amin'ny rano (manomboka amin'ny kely indrindra, amin'ireo izay mety misy risika kely kokoa):
Alao an-tsaina hoe manana alika ianao izay vao tonga avy nanao fanatanjahan-tena miaraka aminao. Nihazakazaka izy, nitsambikina ary nifalifaly teo anilanao, ary rehefa tonga tany an-trano izy dia nankany amin'ny sininy rano ary nanomboka nisotro. Inona araka ny hevitrao no mety hitranga amin'izany? Ny zavatra tena lojika indrindra dia tsy mahazo aina ho azy ity rano ity ary, amin'ny farany, inona no mahatonga azy handoa satria faly be izy ary, rehefa "mameno ny tenany" amin'ny rano ao amin'io fanjakana io dia lavin'ny vatany.
Raha mitranga aminao izany, mila miezaka fotsiny ianao fa tsy misotro rano raha vao tongaFa omeo fotoana kely hahasitrana azy. Tokony hitondra tavoahangy rano ho azy koa ianao rehefa any ivelany ka rehefa tsy manao fanatanjahan-tena sy miala sasatra intsony ianao dia afaka misotro kely mba tsy ho maina rano (na tsy hahatsiaro ho ratsy ny rano).
aretin'ny sarakaty no nahazo
Ny pancreatitis, toy io aretina amin'ny olombelona io, dia aretina lehibe tokoa izay tsy maintsy tsaboina haingana. Ary eny, izy io dia mety ho iray amin'ny antony mandoa ny alikanao rehefa misotro rano. Manazava izahay.
Ny sarakaty dia eo anelanelan'ny vavony sy ny tsinay kely. Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny fandevonan-kanina, fa koa amin'ny fifehezana ny haavon'ny siramamy ao anaty. Na izany aza, rehefa tsy mandeha tsara, mitranga tampoka manerana ny kibo, toy ny nandoro anao. Ary koa, tsy te hihinana ianao, fa te hisotro. Ny olana dia ny aretin-koditra, rehefa mirehitra, mahita ny rano ho toy ny zavatra mampidi-doza ary mahatonga anao handoa. Raha ny marina, na dia tsy manana na inona na inona ao an-kibonao ianao, dia ho afaka mandoa ranon-drano (izay heverina fa rora).
Eny eny, zavatra tsy fantatry ny maro fa ny fivontosana sasany ao amin'ny vavony dia mahavita mandoa alika rehefa misotro, na koa rehefa mihinana.
Raha ny marina, Miankina amin'ny toerana misy ny fivontosana dia mety matetika kokoa (na latsaka), ny fisehoan'ny mandoa. Ohatra, raha ao amin'ny ati-doha io dia manana faritra iray tompon'andraikitra amin'ny fanomezana baiko handoa ka, raha tsindriana io dia tsy ho afaka hanao zavatra mihoatra noho izany ny alika.
Farany, te hiresaka aminao momba ny sakafo, na akora azon'ny alikanao ao anaty na ivelan'ny trano izahay ary mety hiteraka fandoavana. Ny zavatra mahazatra indrindra dia izany na amin'ny sakafo io, fa ny rano ihany koa dia mety misy poizina.
Ohatra, rehefa misotro amin'ny faritra be rano ianao, na tsy misy rano azo sotroina aza. Amin'ny tranga ao an-tranonao dia tsy maintsy ataonao antoka fa madio ny siny na ny toerana ananan'ny alika ny rano, madio ny rano, ary ambonin'izany rehetra izany dia tsy misy kankana ao aminy, satria hanimba azy fotsiny izany ( tena) ao amin'ny vatanao.
Izany ve no antony mahatonga ny rano fisotro hahatonga anao handoa? Tena mety hitranga izany, satria mandà ny rano ny vatanao ary manandrana miaro tena amin'ireo zavatra mampidi-doza ho azy.
Inona no ataoko raha misotro rano sy mandoa ny alikako?
Fantatrao izao ny antony maro isotroan'ny alikanao rano sy mandoa, fotoana izao hijerena izay hatao raha sendra izany ny biby fiompinao. Na inona na inona fotoana ifanaovanao amin'ny mpitsabo anao dia zava-dehibe ny hanarahanao ireo torolalana ireo satria hanampy anao hahafantatra ny maha-zava-dehibe ny toe-javatra izany.
Zahao ny loany
Eny, fantatsika. Tsy mahafinaritra ny angatahinay aminao, fa raha misotro rano ny alikanao ary nandoa, Tokony ho fantatrao raha misy famantarana ao amin'io mandoa io izay afaka mampitandrina antsika. Ohatra, ao amin'ilay puddle nataonao, misy rà ve? Misy sakafo? Bile angamba?
Miankina amin'ny zavatra hitanao dia tsara ny mandeha maika any amin'ny manam-pahaizana manokana.
Jereo raha averiny io
Alika maro no afaka misotro rano, mandoa, ary avy eo mandeha toy ny tsinontsinona. Na miverina misotro rano aza ary aza avela hisy hitranga aminy. Fihetsika izay, raha tsy voamariky ny soritr'aretina hafa, na miverimberina matetika, dia tsy tokony hanahy be loatra isika.
Ankehitriny, mba hitoerana ho tony dia tokony handinika ny alikanao mandritra ny andro vitsivitsy ianao. Mandeha toy ny mahazatra ve izany? Tsy misakafo intsony ve ianao? Mbola mandoa ihany ve ianao? Fantatray fa tsy azonao atao ny mijery azy io 24 ora isan'andro, fa Ampirisihina ianao hiezaka hahafantatra raha mbola manana olana ianao ary, ambonin'izany rehetra izany, mandoa tsy misy antony.
Mitandrema amin'ny rano
Raha misotro rano sy mandoa ny alika, ny zavatra ratsy indrindra azonao atao dia ny manome azy rano bebe kokoa (na manana fidirana bebe kokoa). Ny rano dia mahasosotra ny vavony ka miteraka mandoa. Noho izany, mila mifehy azy ianao ary, mandritra ny fotoana fohy, tsy afaka miditra amin'ny rano izy.
Tsy midika izany hoe manana azy io ianao nefa tsy misotro ora, fa midika kosa fa mila ny vavoninao hiondrika ianao mba hahitana raha mbola miverina ilay zavatra mitovy (ary raha izany dia mankanesa any amin'ny mpitsabo anao).
Raha averimberina imbetsaka dia mankany amin'ny vet!
Raha ny mahazatra, ny alika dia afaka misotro rano sy mandoa indroa; fa rehefa afaka izany dia mety hahatsapa ho tsara. Ka tsy zavatra tokony hampanahy anao izany. Ankehitriny, izany raha miseho tsindraindray.
Inona no hitranga raha manomboka tsy tapaka izy io? Eny, eo ianao no tokony handray andraikitra manoloana ny raharaha, ary manomboka izany manaova fotoana amin'ny vadinao ary lazao azy izay mitondra anao mankany aminy. Mety hanao fitsapana vitsivitsy izy hanamarinana ny rafi-pandevonan-kanina mba hahitana ny antony ary, raha tsy mahita azy izy ary manohy ny olana dia hanadihady bebe kokoa izy.
Ny fandoavana matetika dia mety ho famantarana ny olana ara-pahasalamana; fa ny maro hafa kosa dia "tsotra fa manana vatana ratsy izy amin'izao fotoana izao."
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Antony mahatonga ny alika hisotro rano sy mandoa